“Xadgudubyo Culus Ayaa Weli Ka Socda Qatar…” Hay’adda Amnesty International – somalilandtoday.com
“Xadgudubyo Culus Ayaa Weli Ka Socda Qatar…” Hay’adda Amnesty International
(SLT-Doha)-Kumanaan shaqaale ah oo ku sugan dalka Qatar ayaan mushahar ka helin dadka ay u shaqeeyaan, waxaana lagu qasbaaa inay ku noolaadaan xaalado aad u liita, sida ay ku warrantay hay’adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International.
Amnesty waxa kale oo ay sheegtay in nidaamka shaqaaleynta ee Kafala uu shirkadaha dalkaas siiyo awood ballaadhan oo ka dhan ah shaqaalaha muhaajiriinta ah.
“Wax walba aad ayay ugu qurxoonaayeen warqadda. Hase yeeshee xaqiiqda dhulka ka jirta ayaa ah, marka shaqaalaha aan mushaharkooda la siin, oo ay kiiskooda geeyaan maxkamad ay wajahayaan dagaal sharci oo aad u waqti fog, oo weli qaadanaya saddex illaa sideed bil, si ay maxkamadda go’aan uga gaarto.” Waxaa sidaas tidhi May Romanos oo ah baadhaha Amnesty u qaabilsan muhaajiriinta shaqaalaha ah ee Khaliijka.
“Ayada oo sidaas ay tahay, haddana weli ma hubna in lacagtooda ay helayaan, kuwa badan oo ka mid ah ayaa iska rajo dhiga oo dalalkooda ku laabta ayagoo gacan maran, ama sii jooga Qatar ayaga oo ku nool xaald aad u liidata, qabana rajo ah in lacagtooda u iman doonto.” Ayey tidhi.